Win malaayiin . Play on Internetka - BuyLotteryTicket.info
Lotto - lottery , sidaas darteed waxaad noqon kartaa qof taajir ah ! Ee dunida ka jira qaar ka mid ah bakhtiyaa weyn , kuwaas oo aad raaciyo wayn ku guuleysan karaan . Dalka Maraykanka , lotteries yihiin Ball Power caan ah iyo Malaayiin waayaan , halka diiwaan - garaacay SuperEnalotto iyo Haamud Duale Yurub . In lotteries kuwaas oo hadda ka ciyaari karaan dhammaan internet .
Powerball waa bakhtiyaa Maraykan ah , sidaas darteed waxaad noqon kartaa mid taajir ah ! Waxa waxaa maamula Ururka Caalamiga ah ee Lottery ( MUSL ) . Xeerarka bakhtiyaa Powerball kuwo aad u fudud . Waxaad inuu wax ku dhufto oo dhan lambarada barbaro . Haddii aad ku dhuftay ilaa tirooyinka oo dhan ay ku guulaysto a jaakbotyada weyn ee Jackpot . Haddii dad badani ay tegi doonaan tirooyinka oo dhan , abaal marinta ugu muhiimsan waxaa la wadaago by dadka oo dhan . $ 20 million - si ka badan yahay xaddiga ugu yar ( Ghanna ) aad ku guuleysan kartaa Powerball -ka . Rollover kasta oo , haddii uusan badisay , kor u kacay $ 5,000,000 US . Guuleysto waxaa la siiyaa kolba muddo ka badan 29 sano . Sharciyada ee kulankii ka dhacay Ball Power ah: Dooro 5 lambarrada laga bilaabo 1 ilaa 69 oo lagu daray hal tiro 1 ilaa 26 Tirada dheeraadka ah waa Powerball -ka . Numbers 1 ilaa 69 ay yihiin dhexgalaan caddaan , halka tiro aad ee laga bilaabo 1da ilaa 26 yihiin in ay ulaha cas . Bakhtiyaa Powerball yihiin maalmaha Arbacada iyo Sabtida . Goobta barbaro Powerball waa MUSL ee West faro galin , Iowa . Powerball bakhtiyaa Time: 22:59 US time Bari , halka dhexe ee United States at 21:59 . Raasamaal ugu weyn waxay ahayd 18.02.2006 Powerball . Noqonayaan 365 000 $ 000 million , waxaa lagu dhex qaybiyey 8 ciyaaryahan .
-> Play on Internetka Next jackpot: $230,000,000
Bakhtiyaa SuperEnaLotto waa ciyaar jecel yahay in Europe , asal ahaan kasoo jeeda dalka Talyaaniga . In SuperEnaLotto guul yihiin wayn , mid ka mid ah kuwa ugu badan caalamka . Tani waxay sidoo kale waxaa sabab u ah ciyaartoyda ciyaari karaan SuperEnaLotto Internet-ka . Isku aadka ugu horeeyay ee ka dhacay SuperEnalotto 3 XII 1997 sanad . Tirada nasiib barbaro yihiin 3 jeer toddobaadkii at 20:20 waqtiga degaanka - Tuesday kasta , Khamiis iyo Sabtida . SuperEnaLotto Ku guulaystay yihiin toosaa . The ugu weyn waa 147,807,299.08 euros . Tani waxay wadarta weyn oo ahaa ku guuleystay on Aug 22 , 2009 sanad . Sida badan sida 1.300.000 euros Ghanna hoose waa heerka ugu horreeya ! Si aad u xaddi waa ku guuleystey u ururay . Currently , ma jiraan xayiraad sida ay u xaddiga wadareed SuperEnaLotto . Inta lagu jiro aadka SuperEnalotto waa 6 out of 90 lambarada . Si hit lix ah aad qabtid garaacista 6 Lambarada out of 90 tirooyin qorituur ah . Waa lagama yaabo inay ku dhuftay 6 Lambarada , sababta oo ah waa 1 ilaa 622614630 . Itimaalka of garaacid lambarada 5 waa 1 ilaa 1.235.346 , 4 lambar 1 ilaa 11.907 , halka itimaalka ee garaacid saddex lambar SuperEnaLotto waa 1 ilaa 327 Itimaalka ee ay badiyeen lix SuperEnaLotto waa wax aad u yar , laakiin si jaakbotyada aad u ballaaran mahad . Cover on lambarada nasiib waxaa si toos ah iibsan karaa internet-ka . Si arrintan loo sameeyo , iska diiwaan xisaabtaada website-ka , kaas oo la tacaalayaa SuperEnaLotto la egtahay . Marka lagu diiwaan , waxaad dooran kartaa 6 Lambarada out of 90 Waxaad dooran kartaa sida ay u saamayn barbaro shirkadaha ku dooro taariikhda u jiitaa lambarada soo xulay . Wixii dhirta ee SuperEnaLotto ku jira ee internetka , si toos ah aad u bixin kartaa kaadhka amaahda internet .
-> Play on Internetka Next jackpot: €74,300,000
Waayaan Malaayiin waa bakhtiyaa a American oo la asaasay 2008 , kaas oo abaal ugu yar ee ku guulaystay waa sida ugu badan ee US $ 12 million ( $ 12 million ) .. Sharciga ee ciyaarta Malaayiin waayaan waa in ay ku dhuftey shan lambarada 1 ilaa 75 oo ku dhuftey 1 ilaa 15 ka mid ah tirada dheeraadka ah Numbers 1 ilaa 75 ay yihiin kubadaha white , lambarrada laga bilaabo 1da ilaa 15 waa kubbadaha dahabka . Mid ka mid ah tirada laga bilaabo 1 barbaro 75 waxa loo yaqaan Ball Koyota . Garaacista oo dhan lambarada kuwa Guuleystay Ghanna in Malaayiin waayaan , tanina waa ugu yaraan $ 12 million . Home Win in Malaayiin waayaan ( Ghanna ) waxaa la siiyaa muddo 26 sano ah , sanad walba hal hafto midna . Waayaan Malaayiin bakhtiyaa Waxanna Tuesday walba iyo Jimco walba at WSB - TV at 23:00 time Bari ee USA . Drawings qaadan meel Atlanta . Ma qabtaa by Glenn Burns . Abaalmarinta ugu weyn ee Malaayiin waayaan ku dhacay 16.10.2009 . Waxa ay ahayd $ 200 million ( $ 200 million (ku dhowaad 137 milyan oo Euro ) . Fursada of jaakbotku ( 5 +1) waa 1 ee 175.711.536 . Fursada of garaacid 5 lambarada ( kubadaha white ) waa 1 ilaa 3.904.701 . Guuleysto ka dibna waa $ 250,000 . Fursada of garaacid 4 kubadaha white iyo dahab ( 4 +1) waa 1 d0 689,065 , garaacid afar kubadaha white iyo dahab ( 4 +1) guuleysan $ 10,000 . $ 150 ku guuleysto qofka ku dhuftay afar kubadaha white ( 4 +0 ) ama 3 kubadaha cad iyo mid ka mid dahab ah ( 3 +1) . Fursadda ah garaacid 4 kubadaha white yihiin 1 ee 15.313 , halka garaacid 3 +1 waa 1 ilaa 13.781 . Garaacista saddex kubadaha white ( 3 +0 ) guuleysan $ 7 , iyo fursad ah waa 1 ilaa 36 1 to 844 - sidaas waa fursad ay ku dhufatay laba kuul ee kubada caddaan iyo dahab , ka dibna Guuleystay $ 10 Haddii aan ku dhuftey hal kubada cad iyo dahabka , ka dibna aad ku guulaysato $ 3 , iyo fursadaha uu garaaco sida isku dhafan yihiin ilaa 141 Abaalmarinta ugu yar ee waayaan Malaayiin waa $ 2 , aad ugu guulaysan karaan by garaacid kubada dahabka , iyo hilaada ee garaacid oo kaliya gudbikaraa oo dahabka waa 1 ilaa 75
-> Play on Internetka Next jackpot: $245,000,000
Euro Malaayiin bakhtiyaa waa kuwa ugu caansan ee Europe . Countries meesha aad ku ciyaari karaan Malaayiin Euro yihiin : Austria , Belgium , Spain , France , Ireland , Luxembourg , Portugal , Switzerland iyo Boqortooyada Ingiriiska . Malaayiin Euro abaabulay ee Spain by Lottery bakhtiyaa s Aquestas des estada , ee UK by Camelot , iyo in France by bakhtiyaa Francaise des Jeux . Iyada oo korodhka la saadaaliyey in tirada dal ee Midowga Yurub , waxaa suurtagal ah in la kordhiyo dalalka ku jira oo aad ka cayaari karaan Malaayiin Euro . Malaayiin Euro The ciyaarta bakhtiyaanasiibka marka hore la qaban jiray 13.02.2004 ee Paris . Sawiro lambarrada ee ciyaarta Malaayiin Euro waxaa la qabtaa maalmaha Jimcaha at 21:25 Paris . Ciyaarta waxay ka kooban tahay in xaqiiqda ah in lambarada 5 group yihiin telefoonno 50 . Intaa waxaa dheer , waxaa jira labo tiro oo barbar dhac laga bilaabo 1 illaa 9 Stresa waa mishiin oo ka kooban 50 kubadaha , halka mishiinka leh 9 kubadaha yihiin Paquerette . Si aad ku guuleysato raasamaal waa in la garaaco oo dhan lambarada kuwa . Markii hore , raasamaal waa ilaa 15 milyan oo . Euro . Abaalmarinta ugu sareeya ee Malaayiin Euro waa ilaa 126 000 000 million . Ciyaaryahanka ayaa ku guulaystay fakturaer wayn ee May 2009 ee Spain . Itimaalka ee ku guulaystay abaal marinta weyn ee malaayiinta Euro waa Sidee u ciyaaro ee Malaayiin Euro ? The Malaayiin Euro lagu ciyaari karaa hab aad u sahlan oo internetka ah . Just iska diiwaan xisaabtaada website-ka u dhiganta , taas oo na siinaysaa awood u leh inay u soo diri Faaruq Euro Malaayiin , guul maamulka . Itimaalka of badisay qadar kasta oo Malaayiin Euro waa 1:24 , sidaa daraadeed waxa aad u ballaaran . Itimaalka ee ku guulaystay abaal marinta weyn ee malaayiinta Euro waa 1:76000000000 ( 1 ee 76 million ) . All badisay Euro Malaayiin yihiin oo bilaa cashuur ah .
-> Play on Internetka Next jackpot: €76,000,000